Zimbabwe’s Cosafa Cup under threat
2019 tournament may not be held at all.
Monday Apr 01, 2019. 13:00
The 2019 Cosafa Cup may not be held after the Southern African regional body accused Zimbabwe of reneging on agreement to host this year’s tournament.
Zimbabwe appear to be struggling to source the necessary finances to hold the Cosafa Cup, and in the process will possibly deny five teams from the region a unique opportunity to warm up for the Africa Cup of Nations in a competitive environment.
Angola, Madagascar, Namibia, South Africa and Zimbabwe are the five Cosafa representatives who will play at the 2019 AFCON in Egypt.
In a strongly worded statement, Cosafa accused Zimbabwe of breaching their hosting agreement and threatened disciplinary proceedings.
"For the first time in 21 years, five Cosafa member countries have qualified to participate in the continental showpiece, including Zimbabwe's Warriors.”